Kutheni sifuna iMagnesium?
Ngaphambi kokuba singene kwiMagnesium L-Threonate yongeza i-nootropic, Kuya kufuneka uqonde malunga nomphambili wayo ophambili.
I-Magnesium yimicronutrient ebalulekileyo, ebandakanyeka ngokukuko kwiinkqubo ezininzi zomzimba. Isixhobo sinokubamba ukunciphisa izihlunu kunye nokuphumla, ukuhlanganiswa kweprotheni kunye nemisebenzi ye-neuronal. Ngaphandle koko, ilawula iswekile yegazi kwaye igcina uxinzelelo lwegazi.
Nangona ungathatha iMagnesium ngese, uninzi lwezi zongezelelo ziyadityaniswa okanye zidityaniswe neeamino acid. I-Chelation iphucula ukufunxwa, ukuzinza, kunye nokufumaneka kwe-bioavailability kwezimbiwa.
Uxinzelelo lweMagnesium luphezulu kwingqondo kunakweliphi na elinye ilungu lomzimba. Kubuyisa ukuguga kwengqondo ngokwandisa ubukho beplastikhi kunye nokuxinana kwe-synaptic, zinto ezo zibaluleke kakhulu ekusebenzeni kwengqondo. Ukusilela kwe-Magnesium akhawunti ukuphazamiseka kwengqondo okuguquguqukayo, isifo sengqondo esixhalabisayo, isifo i-Alzheimer, ukulimala kwengqondo, isifo sengqondo, ukuxhuzula, ukudakumba, phakathi kwezinye iimeko.
Ukusetyenziswa konyango lweMagnesium kwimpilo yemithambo-luvo ibilithambo lokuxabana. Isizathu kukuba le minerali ayiweli ngokulula isithintelo segazi-lobuchopho. Nangona kunjalo, ukufumanisa okuqhekezayo komhlaba I-Magnesium L-Threonate powder Isisombululo sokugqibela sale puzzle.
I-Magnesium L-Threonate powder yindibaniselwano yeMagnesium kunye neL-Threonate iimolekyuli. Le nto iphindwe kabini njenge nootropic kunye neziyobisi ezikhuselayo.
Ubukho bayo buqala ngo-2010 xa uGuosong Liu kunye nezinye iinzululwazi zenzululwazi eMassachusetts Institute of Technology bafumanisa isongezelelo esisebenzayo esonyusa ukuqonda kwiigundane. Ngaphambi kokufumanisa oku, abaphandi babengenakufumanisa ukuba bayilayisha njani i-magnesium kwingqondo kuba izimbiwa zivaliwe kuthintelo lwegazi nengqondo.
Izongezo zeMagnesium L-Threonate ziyenziwa. Nangona kunjalo, ayifumaneki ngakumbi kunayo nayiphi na enye into yeMagnesium. Ngaphandle koko, iwela ngokulula isithintelo segazi-yingqondo, yiyo loo nto, indawo yokugqibela yokusilela kweMagnesium kwingqondo. Ikhompawundi inyusa amanqanaba e-magnesium kwingqondo nge-15%.
Izibonelelo zeMagnesium L-Threonate ingqondo ngokwandisa i-neuroplasticity. Ngaphandle koko, kuyasebenza ukonyusa izinto ezivela kubuchwephesha be-neurotrophic, ezibalulekileyo ekubunjweni kweeseli ze-neuronal.
Isebenziselwa ntoni iMagnesium L-Threonate?
Ii-Psychonauts zithenga iMagnesium L-Threonate ngezibonelelo zayo ze-nootropic. Ikhulisa inkumbulo ye-episodic, ukufunda, kunye nokuphucula uxinzelelo. Isongezelelo yidosi yokuyalelwa kwizigulana ezinengxaki yokulahleka kwememori enxulumene nobudala, i-ADHD, isifo sengqondo esixhalabisayo, kunye nesifo se-Alzheimer's.
Izibonelelo zeMagnesium L-Threonate njengezongezo ze-nootropics
Ukuphucula imisebenzi yokuqonda
IMagnesium iwela ngokulula isithintelo segazi-lobuchopho ngenxa yento yeTreonate. Le molekyuli inoxanduva lokunyuka kwe-synaptic density kunye nokudluliselwa kwe-neuronal.
Ukuthatha iMagnesium L-Threonate yonyusa ukusebenza kwengqondo, uxinzelelo kunye nenkumbulo yokusebenza. Ngokwetyala elipapashiweyo leklinikhi, izifundo eziye zathatha le nyuselo zichaze ukuphuculwa kwememori ye-episodic, umsebenzi olawulayo kunye nengqwalaselo.
Ukubuyisa ukuguga kwengqondo
Sebenzisa iMagnesium L-Threonate kuguqula iminyaka yobudala yabantu abadala. Abaphandi baqinisekisa ukuba amayeza angenza imisebenzi yobuchopho ivele iminyaka elithoba.
Ukwaluphala kwenza ukuba i-synapses yengqondo inciphe, kukhokelela ekunciphiseni kwengqondo. Nangona kunjalo, izongezo zeMagnesium L-Threonate zisebenza ngokuthintela ilahleko yezi synapses kunye nokwenza ngcono i-neuroplasticity. Ngaphandle koko, igcina amanqanaba engqondo emagnesium ukuya kumanqanaba aphezulu.
Isongezelelo seMagnesium L-Threonate ADHD sinciphisa amaxhala kunye noxinzelelo kumanqanaba. Iyeza liyakhanyisa imo yakho, likushiye ngokucaca okuphezulu kwengqondo. Isebenza ngokuphucula ii-neurotransmitters ze-GABA kunye nokuthintela ukwenziwa kweekhemikhali zoxinzelelo.
Kwisithintelo segazi-lobuchopho, Izongezo zeMagnesium L-Threonate vimba iihormoni zoxinzelelo ukuba zingene kwingqondo.
Ngaphandle koko, kukugcina kwizikhumbuzo ezoyikekayo, izoyikiso zokwenyani, kunye namava abuhlungu abangela uxinzelelo.
Ukuba ulele, ungathenga iMagnesium L-Threonate yokulungisa ukulala. Isongezelelo siyayiphumlisa imisipha ngokukhupha i-calcium kubo. Iyanciphisa ne-cortisol kunye nezinye iihormone zoxinzelelo, ezithintela i-melatonin kunye nokukwazi ukulala kancinci.
Ulawulo lwezifo ze-Neurodegenerative
Ukuba namandla kweMagnesium L-Threonate ye-ADHD kunyango lwezifo ze-neurodeergenerative kwinto yokuba ezi meko zinxibelelana namanqanaba asezantsi eMagnesium. Iingcali ze-Neuroscientist zinxulumana nokusilela kweMagnesium kwingqondo ene-ADHD, isifo sengqondo esixhalabisayo, kunye ne-Alzheimer's.
Ngaphezu, ukuthatha iMagnesium L-Threonate capsules kuya kuthintela ukwehla kwengqondo kunye nokulahleka kwememori, okuyimiphumela ye-neurological eqhelekileyo kwisifo sengqondo esixhalabisayo okanye i-Alzheimer's.
Uyithatha njani iMagnesium L-Threonate
I-Magnesium L-Threonate idosi yeehenjisi kwizinto ezimbalwa, kubandakanya isini, ubudala, kunye nokusetyenziswa okucetywayo. Umzekelo, ithamo eliqhelekileyo labaneminyaka eli-19 ukuya kwengama-30 ubudala limalunga ne-400mg ngelixa abantu basetyhini beya kusebenzisa malunga ne-300mg. Nabani na ongaphezulu kweminyaka engama-31 angonyusa ubungakanani nge-20mg, kuzo zombini izini.
Xa uthatha iMagnesium L-Threonate nootropic yokunyusa ukuqonda, idosi inokudubula iye kuthi ga kwi-1200mg ngosuku. Ngokuchasene noko, inani liwela kwi-400mg xa usebenzisa iMagnesium L-Threonate yokuncedisa ukulala ngenxa yeepropathi zayo zokulalisa ngomzimba.
Xa uthatha eli qela njenge yokutya, ungasebenzisa phakathi kwe-1000mg kunye ne-2000mg ngosuku. Ngokukhethekileyo, kuya kufuneka wahlule i-Magnesium L-Threonate capsules kwiidosi ezimbini kwaye uyilawule kusasa nangokufutshane ngaphambi kokuba ulale.
Ngaba zikho iziphumo ebezingalindelekanga ezithatha iMagnesium L-Threonate supplement?
Iziphumo eziqhelekileyo zeMagnesium L-Threonate zibandakanya iintloko kunye nokozela. Ukulala kuyintsikelelo yokuzifihla, kuxhomekeke kwimeko yakho. Umzekelo, ukuba unengxaki yokungalali, iziyobisi zokulala iMagnesium L-Threonate ziya kukunceda ubambe i-wink.
Olu ncediso luya kuphazamisa nokusebenza kwamanye amachiza. Kuya kufuneka ubonane nogqirha wakho xa usela amayeza okubulala iintsholongwane, izihlaziyi zezihlunu, ukunciphisa igazi, okanye amayeza oxinzelelo lwegazi. Isizathu kukuba i-magnesium inokulibazisa i-pharmacodynamics.
I-Magnesium L-Threonate powder isebenzisa kunye nokusetyenziswa
I-Magnesium L-Threonate yeyona nootropic inamandla. Ikhuthaza ukwakhiwa kwememori, ukufunda, kunye nokuqwalaselwa. Ngesi sizathu, sisiyobisi esinyanzelweyo sokulawula iimeko ze-neurodegenerative.
I-Magnesium L-Threonate ixhala leziyobisi ibuyisela impandla yamadoda. I-L-Threonate compound inciphisa amandla e-dihydrotestosterone (DHT) hormone, ejongene nokulahleka kweenwele.
Ngaphezu koko, abantu abaneengxaki zokulala banokusebenzisa la mayeza ukulungisa ukungalali. Ayiphelisi izihlunu kuphela kodwa ikwathoba umzimba ngeli xesha ukunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo. I-Flick ngokusebenzisa iMagnesium L-Threonate uphononongo iqinisekisa ukuba uninzi lwabasebenzisi luya kuba nalo ukozela kwakamsinya emva kokwenza isongezelelo.
Uyithenga phi iMagnesium L-Threonate powder eluhlaza
Ngokuqinisekileyo unamathele kwi-Magnesium L-Threonate apho ungathenga khona isikhokelo, ucinga ukuba ukufunyanwa kwe-counter-the-counter nootropics Akukho mthethweni kwiindawo ezininzi. Ewe, lixesha lokuba ucinge ukuthenga i nezongezo kwiivenkile ezisemthethweni kwi-Intanethi.
Sizivelisa ngokuzimeleyo zonke iimveliso zethu kwiilebhu ezilawulwayo ezisemgangathweni. Ungagcina ngaphezulu ngokuthenga i-magnesium L-Threonate powder ngobuninzi.
Yintoni iMagnesium L-Threonate elungileyo?
Iipilisi zeMagnesium L-Threonate zixhasa umsebenzi wokuqonda kunye nokwakhiwa kwememori. Ngokungafaniyo nezinye Iindidi zemagniziyam, eli khompawundi ligcwele umqobo kuthintelo lwegazi-lobuchopho. Yi i-nootropic ye-neuroprotective.
Ngakumbi, abaguli abalwa nezifo ezingenayo i-neurodeergenerative banokuthenga iMagnesium L-Threonate yokulawula iimeko zabo.
Ndifanele ndiyithathe nini iMagnesium L-Threonate?
Kufuneka uthathe le ncediso kusasa nangaphambi kokulala. Enye ye Magnesium L-Thononate iziphumo ebezingalindelekanga isiyezi. Yiyo loo nto kufanelekile ukuba uyilawule ebusuku.
Loluphi uhlobo lweMagnesium eyona ilungileyo?
Kukho iintlobo ezingaphezu kwesihlanu ze Izibonelelo zeMagnesium, ezisebenza ngokwahlukileyo. Ke ngoko, ukhetho lwakho kufuneka luxhomekeke kuyo nayiphi na inkqubo yomzimba onqwenela ukuyilawula. Thatha, umzekelo, iMagnesium L-Threonate lolona khetho lufanelekileyo kuye nabani na osemva kokuphucula ukuqonda kunye nokunyusa ukusebenza kwengqondo yabo.
Ngokungafaniyo noogxa bayo, Magnesium L-Thononate Amachiza oxinzelelo anokufumaneka okuphezulu kokudibana kunye nokudibanisa isithintelo segazi-nengqondo.
Ngaba iMagnesium L-Threonate ilungile kwixhala?
Ukuthatha iipilisi zeMagnesium L-Threonate kuya kunciphisa imeko yakho, kunciphise uxinzelelo, kunye nokunciphisa uxinzelelo. Iziphumo zayo zokuthomalalisa ziyenza ibe sisiyobisi esifanelekileyo sokuxhalabisa.
Ngaba iMagnesium L-Threonate ilungile kuxinzelelo lwegazi?
I-Magnesium L-Threonate inokusebenza njenge-blocker ye-calcium blocker. Iyeza liya kulithoba kakhulu uxinzelelo lwegazi ukuya kuthi ga kwi-5.6 / 2.8mm Hg. Izifundo ziyaqinisekisa ukuba kuthintela izifo zentliziyo kubandakanya ischemic stroke, uxinzelelo lwegazi, imeko zentliziyo kunye neentliziyo ezinesifo.
Ukudityaniswa kweMagnesium L-Threonate idosi kukuba ungayilawula ngamachiza aliqela oxinzelelo lwegazi.
Ithatha ixesha elingakanani ukusebenza kweMagnesium L-Threonate?
Izibonelelo zeMagnesium L-Threonate ziya kubonakala emva kwenyanga, ngakumbi ukuba ngaba ubhankisha kwisongezelelo sokuqonda. Ifuna ubuncinci iiveki ezine ukuba iphakamise inqanaba le-magnesium kwingqondo, efanelekileyo ekubunjweni kwememori.
Ukuba uphatha ukulala, isongezelelo siya kusebenza ngokukhawuleza. Ngoxinzelelo, uxinzelelo, kunye noxinzelelo lwasemva koxinzelelo, uphononongo lweMagnesium L-Threonate luqinisekisa ukuba iziphumo ziyaqapheleka kwiveki.
UShen, Y., et al. (2019). Unyango lweMagnesium-L-Threonate inyusa inqanaba leMagnesium kwiCerebrospinal Fluid kunye neAtentenates Motor Deficits and Dopamine Neuron Loss in a Mouse Model of Disease's Disease. Izifo Neuropsychiatric kunye neNyango.
Slutsky, mna, et al. (2010). Ukuphuculwa kokuFunda kunye neMemori ngokunyusa iMagnesium yeBongo. Umqulu 65, Ukukhutshwa 2, p143-290.
Ngokukhawuleza, AG, et al. (2013). Isifo esinganyangekiyo seMagnesium-L-Threonate Isantya sokuphela kunye nokuNciphisa ukubuyiswa okuzenzekelayo kweNqanaba lokuNcamisa ukungcamla. I-Pharmacology, Biochemistry, kunye nokuziphatha, uMqulu 6, p16-26.
Wei, Li okqhubekayo. (2014). Ukuphakama kweBongo Magnesium kuthintela ukuphulukana kweSynaptic kunye nokubuyisa ukusilela kokuqonda kwiAlzheimer's Disease Mouse Model. Ubuchopho beMolekyuli.
UZarate, uCarlos et al. (2013). Iiparadigms ezintsha zoNyango oluXhathisa ukunyanga. Iziganeko zeNew York Academy yeSayensi.
UWroolie, TE, et al. (2017). Uvavanyo oluVulekileyo lwelebheli lweMagnesium L-Threonate kwizigulana ezinesifo sengqondo esixhalabisayo. Ubuchule bokuguga, uMqulu 1.
URAW MAGNESIUM (2R, 3S) -2,3,4-TRIHYDROXYBUTANOATE POWDER (778571-57-6)
1.Kutheni sifuna iMagnesium?
2.Yintoni iMagnesium L-Threonate?
3.Yenzelwa ntoni iMagnesium L-Threonate?
I-4 Magnesium L-Threonate izibonelelo njengezongezo ze-nootropics
5.Ukuthatha njani iMagnesium L-Threonate
6. Ngaba kukho naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga ezithatha iMagnesium L-Threonate supplement?
I-7.Magnesium L-Threonate powder isebenzisa kunye nokusetyenziswa
8.Ukuphi ukuthenga iMagnesium L-Threonate powder eluhlaza